China Direct Steam Retort ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Dingtaisheng
Njikere iri nri, Porridge
Iwu FDA na China emeela iwu zuru ezu banyere nhazi na arụmọrụ nke ikuku mmiri, yabụ ọ bụ ezie na ha abụghị ndị isi na ike oriri, ọtụtụ ndị ahịa ka na-amasịkarị ha n'ihi ọtụtụ ngwa ha na ọtụtụ canneries ochie. N'ihe banyere iji hụ na iwu FDA na USDA chọrọ, DTS emeela ọtụtụ njikarịcha n'ihe gbasara akpaaka na nchekwa ike.
Edo okpomọkụ nkesa:
Site na iwepu ikuku na arịa azụ, ebumnuche nke nsị mmiri zuru oke. Ya mere, na ngwụsị nke oge nnweta ikuku, ọnọdụ okpomọkụ dị n'ụgbọ ahụ rutere n'ọnọdụ dị otu.
Soro asambodo FDA / USDA:
DTS enweela ndị ọkachamara na-ahụ maka nkwupụta ọkụ ma bụrụ onye otu IFTPS na United States. Ọ na - akwado ụlọ ọrụ nkwenye nke atọ nke FDA kwadoro nke ọma. Ahụmahụ nke ọtụtụ ndị ahịa North America emeela ka DTS mara nke ọma FDA na USDA usoro iwu chọrọ na teknụzụ ịgba ọgwụ mgbochi.
Dị mfe ma bụrụ onye a pụrụ ịtụkwasị obi:
E jiri ya tụnyere ụdị ọgwụgwọ ọzọ, ọ nweghị usoro ọkụ ọkụ ọzọ maka ọbịbịa na sterịization, yabụ naanị uzuoku chọrọ ka a na-achịkwa ya iji mee ka ụdị ngwaahịa a na-agbanwe agbanwe. FDA akọwaala atụmatụ na arụmọrụ nke ikuku mmiri ahụ n'ụzọ zuru ezu, na ọtụtụ canneries ochie ejirila ya, yabụ ndị ahịa maara ụkpụrụ ọrụ nke ụdị retort a, na-eme ka ụdị ọrụ a dị mfe maka ndị ọrụ ochie ịnakwere.
Ibujuru nkata zuru ezu n'ime Retort, mechie ụzọ. A na-ekpochi ọnụ ụzọ azụ site na mgbochi nchebe atọ iji jide n'aka nchekwa ahụ. A na-arụchi ụzọ ahụ n'ụzọ arụ ọrụ niile.
A na-eme usoro ọgwụgwọ ụlọ ahụ na-akpaghị aka dịka uzommeputa nke ntinye micro nhazi njikwa PLC.
Na mbido, a na-agbanye uzuoku n'ime akuku azụ site na ọkpọkọ mmiri na-agbasa, na ikuku gbapụ site na valvụ. Mgbe a na-ezute oge na ọnọdụ ọnọdụ okpomọkụ dị na usoro ahụ n'otu oge, usoro ahụ na-aga n'ihu na-abịa. nkesa na ezughi oke nwoke. Ndị na-agba ọbara ọgbụgba ga-emeghe maka oghere ahụ dum, gbagote, isi nri ka steam wee nwee ike ịmalite convection iji hụ na ịdị n'otu ọnọdụ okpomọkụ.
Tin nwere ike
Ihe ọ (ụveraụ (protein inine, tii, kọfị): tin nwere ike
Akwukwo nri na nkpuru osisi (ero, akwukwo nri, agwa): tin nwere ike
Anụ, ọkụkọ: tin nwere ike
Azụ, nri mmiri: tin nwere ike
Babyfood: tin nwere ike
Jikere iri nri, porridge: tin can
Anu anu ulo: tin can
Nke gara aga: Mmiri Imikpu Mmiri
Osote: Steam & ikuku ikuku
Akpaka Steam ogbe kwụ Retort
Steam Retort igwe
Steam Rotary Ntughari